Akụkọ - Ime ụlọ maka ịkọwa ahụ ụlọ ọrụ egwuregwu
Lululemon nwetara ụlọ ọrụ ahụike n'ụlọ ahụ
Lululemon nwetara nnabata mbụ buru ibu kemgbe ọ malitere, wee were $ 500 iji zụta Mirror ụlọ ọrụ ahụike n'ụlọ. Calvin McDonald buru amụma na Mirror ga-aba uru na 2021. Isi ngwaahịa nke Mirror bụ "enyo zuru oke". Mgbe emechiri ya, ọ bụ enyo zuru ogologo. Mgbe emepere ya, enyo a bu ihe nlere anya na enyo enyo nke ejiri igwefoto tinye ya na igwe okwu, nke n’egosiputa onodu onye oru ya na ihe omuma ya n’oge ma nwekwaa ike mezue ihe omumu nke ndi ndu banyere ihe omuma.
Na Disemba 10th, Lululemon weputara akuko omuma nke ato ya. Ahịa maka nkeji iri na ise bilitere 22% kwa afọ na US $ 1.117 ijeri, oke uru bara ụba ruo 56%, uru nha bilitere 12.3% na US $ 143 nde, ahịa ahịa ya karịrị okpukpu abụọ. Adidas Ihe ịga nke ọma Lululemon bụ nke a na-ekewapụ site na ahụmịhe ndị na-azụ ahịa yana nhọpụta ndị ahịa na-agbanwe agbanwe na nkwado na ụfọdụ ndị nkuzi yoga na ụlọ ọrụ ọzụzụ. Nke mbụ, a na-enye ndị nkuzi uwe yoga n'efu, nke mere na ndị nkuzi na-eyi uwe Lululemon yoga iji kuzi ihe. Ndị nkuzi a abụrụlakwa “ndị nnọchi anya ika” Lululemon iji kwalite mmata aha. N'otu oge ahụ, ọ malitere usoro uwe ụmụ nwoke na ngwaahịa ndị ọzọ na ahụmịhe na-anọghị n'ịntanetị iji mee ka ndị na-ege ahịa akara ma zụọ ọchịchọ.
N'ịbụ onye nkwalite nke ahụike ime ụlọ na-akpali, mmepe nke ụlọ ọrụ egwuregwu nke ime ụlọ ejiri nwayọ nwayọ. Ngwakọta Mania bụ ụdị egwuregwu. Ngwaahịa ya na-emesi ọmarịcha okpukpu abụọ ike n'ọdịmma na nka. Ọ na-anọchi echiche nke ejiji dị elu n'ime atụmatụ nke egwuregwu egwuregwu, ma na-anwa inyocha ohere nke ejiji egwuregwu site n'echiche dị iche iche nke teknụzụ, ọdịbendị na nka. Onye mmebe egwuregwu Carver na-eme egwuregwu di elu. Na Nọvemba 13, 2020, ihe egwuregwu akpọrọ Fanatic Fanatic mechara ego ruru yuan C 100 nde.
N'okpuru mmetụta nke ọrịa ahụ, ụlọ ọrụ egwuregwu na-emepe ngwa ngwa, na enweghị ike ileghara ịrị elu nke ụlọ nwanyị na-arụ ọrụ n'ime ụlọ anya. Enwere ike ịhụ ya site na mwepụta yoga na-esote site na ejiji na egwuregwu egwuregwu egwuregwu dịka NIKE na PUMA. Oge a, na mbido Machị nke afọ a, Adidas na Nini Sum jikọrọ aka wepụta oge ọhụrụ nke imekọ ihe ọnụ maka naanị ụmụ nwanyị; sitere n'ike nka di iche-iche dika ndi edere na onyogho, tinyere nke ejiri aka ese ihe mara mma mere ka umu nwanyi ohuru teta. Zụlite ọtụtụ edemede, nke kwesịrị ekwesị maka ntụgharị uche yoga, ikuku na egwuregwu ndị ọzọ.
N'ihe banyere egwuregwu na ahụ ike ụmụ nwanyị, NIKE mepere emepe ihe omume ụmụ nwanyị VIP yoga ụmụ nwanyị, nke gụnyere ịkekọrịta ihe ọmụma ụmụ nwanyị NIKE na ihe ndị ọzọ. Nke abuo, NIKE mekwara usoro yoga ohuru ohuru, na-eweta ezigbo ihe omumu nke ndi choro yoga n'anya, ma na-akpali ikike na ume ha na-emetutaghi; na mgbakwunye na ụdị ejiji, ha na-etinyekwu uche na akwa ọrụ ma were ihe pụrụ iche DRI-FIT na-ehicha ngwa ngwa akwa ahụ na-agbanwe na-akwalite ire ere nke lactic acid na ahụ mmadụ, na-ebelata mmerụ ahụ na nro mgbe mmega ahụ gasịrị, ma belata mmetụta ahụ nke ike ọgwụgwụ.
Isi ụlọ ọrụ dị na Munich, Veloine bụ onye mmeri nke onyinye onyinye ISPO2021 Fall Winter. Veloine bu uzo eji agba oso nke ndi nwanyi. Dị ahụ na-egosi na ọtụtụ ụmụ nwanyị ka na-achọsi ike na-emega ahụ n'oge ime ime. N'ihi nnukwu aka nke afọ ime, ha na-eyikarị uwe nwoke na-agba ịnyịnya, nke na-ekwekọghị n'usoro ahụ nke ụmụ nwanyị dị ime. Veloine emebelarị uwe ụmụ nwanyị dị ime maka ụmụ nwanyị dị ime. Usoro, agbakwunyere n'ime nhazi ọkachamara, na-eweta nchebe nye ụmụ nwanyị dị ime.